Multi-level Marketing ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုလဲ ? – Gentleman Magazine
အခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထူးထူးခြားခြား အရောင်းပုံစံနဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အတော်များများစိမ့်ဝင်ပျံ့နှံလာခဲ့ပါတယ်။ အရင်ကတည်းကလည်း အလားတူပုံစံနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့် အခုလောက်အထိ အရေအတွက်မများခဲ့သလို လူသိလည်းနည်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအခါမှာတော့ အမှတ်တံဆိပ်နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်ငန်းတွေ များစွာပေါ်ထွက်လာပြီး နည်းမျိုးစုံ၊ စနစ်မျိုးစုံနဲ့ ဆွဲဆောင်နေကြပါတယ်။ ဒီလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့ Multi-level Marketing (MLM) စနစ်နဲ့ ရောင်းဝယ်ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Multi-level Marketing (MLM) ဆိုတာကတော့ အရောင်းသမားတွေအနေနဲ့ သူတို့ရောင်းနိုင်တဲ့ ရောင်းအားပေါ်မှာသာမက ဖိတ်ခေါ်စည်းရုံးပေးနိုင်တဲ့ အခြားအရောင်းသမားတွေရဲ့ ရောင်းအားအတွက်ကိုပါ အကျိုးခံစားခွင့်ပေးထားတဲ့ Marketing Strategy တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အရောင်းသမားတွေက ဖိတ်ခေါ်စည်းရုံးပေးထားပြီး အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာတဲ့ အရောင်းသမားတွေကို Downline (တချို့တွေကတော့ ဒီလိုခေါ်တာကို လက်ခံတတ်ကြပါဘူး) လို့ ခေါ်ဆိုကြပြီး အဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက် အကျိုးခံစားခွင့်တွေ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ MLM လုပ်ငန်းတွေကို Pyramid Selling, Network marketing နဲ့ referral marketing လို့လည်း ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။
ပြောရမယ်ဆိုရင် MLM ဆိုတာ ၀ယ်သူထံ တိုက်ရိုက်ရောင်းချတဲ့ စနစ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို တိုက်ရိုက်ရောင်းချတယ်ဆိုရာမှာ အရောင်းသမားတွေဟာ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နှုတ်ပြောစကားနဲ့ ကြော်ငြာရောင်းချတာပဲဖြစ်ဖြစ်နဲ့ သုံးစွဲသူတွေကို ရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်။ MLM စနစ်မှာတော့ အရောင်းသမားတွေဟာ ကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကို ရောင်းချရုံသာမက သုံးစွဲသူတွေကို ဖြန့်ဖြူးရေး အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တွေအဖြစ်နဲ့ ပါဝင်ဖို့အထိ ဖိတ်ခေါ်စည်းရုံးကြပါတယ်။
MLM ပုံစံနဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်ပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေမှာ ဝေဖန်မှုတွေ၊ တရားစွဲဆိုခံရမှုတွေ မကြာခဏကြုံတွေ့ရလေ့ ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ Pyramid Schemes နဲ့ အသွင်တူနေတာ၊ ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာ၊ ကနဦး ရင်းနှီးထည့်ဝင်ငွေများတာ၊ ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချဖို့ထက် အဖွဲ့ဝင်သစ်စည်းရုံးရေးကို ပိုပြီးအားပေးလှုံ့ဆော်တာ၊ အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို မလိုအပ်ပဲ ၀ယ်ယူနေရတာ၊ ပုဂ္ဂိုဟ်ရေးခင်မင်မှုတွေကို ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချဖို့၊ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဆွဲဆောင်ဖို့ ပစ်မှတ်ထားခိုင်းတာ၊ ရှုပ်ထွေးပြီး နားလည်ရခက်တဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်ပုံစံသတ်မှတ်ထားတာတွေကြောင့် ဝေဖန်ပြစ်တင်ခံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံသား စာရေးဆရာနဲ့ ဈေးကွက်ပညာရှင် Dominique Xardel ကတော့ Network marketing နဲ့ Multi-level Marketing တို့ဟာ အနက်တူသံကွဲဝေါဟာရတွေသာ ဖြစ်ပြီး တိုက်ရိုက်အရောင်းစနစ်ပုံစံကွဲတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Xardel ရဲ့အဆိုအရ Direct Selling (တိုက်ရိုက်အရောင်းစနစ်)နဲ့ Network marketing (ကွန်ယက်ဈေးကွက်)စနစ်ဆိုတာတွေက ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်ကို ဆိုလိုပြီး Multi-level Marketing ဆိုတာကတော့ အကျိုးခံစားခွင့်အစီအစဉ်ကို ဖော်ညွှန်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Multi-level marketing ကို ရည်ညွှန်းဖော်ပြတဲ့ အခြားအခေါ်အဝေါ်တွေကတော့ Word-of-mouth marketing, interactive distribution နဲ့ relationship marketing စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အခေါ်အဝေါ်တွေ အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုတာက Multi-level Marketing စနစ်ကို တရားမ၀င် ငွေကြေးကလိန်ကျမှု (Ponzi schemes), ဆင့်ပွားစာ (Chain letters) စတဲ့ သုံးစွဲသူတွေဆီကို လိမ်လည်နေတဲ့ စနစ်ပုံစံတွေနဲ့ ကွဲပြားဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Multi-level Marketing လုပ်ငန်းတွေကို ထောက်ခံအားပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Direct Selling Association(DSA) ကတော့ (၁၉၉၀)ခုနှစ်မှာ အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့(၂၅)ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာ MLM စနစ်ကို အသုံးပြုခဲ့ပြီါ် (၁၉၉၉)ခုနှစ်မှာ (၇၇.၃)ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်လာတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ (၂၀၀၉)ခုနှစ်မှာ DSA အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ (၉၄.၂)ရာခိုင်နှုန်းက MLM စနစ်ကို သုံးနေပြီဖြစ်ပြီး ရောင်းချသူ (၉၉.၆)ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ရောင်းအား (၉၇.၁)ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိခဲ့တယ်လို့လည်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Avon, Electorlux, Tupperware နဲ့ Kirby တို့လို ကုမ္ပဏီတွေက ယခင် Single level Marketing ပုံစံနဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ရောင်းချရာကနေ MLM ပုံစံအကျိုးခံစားခွင့်စနစ်ကို သုံးလာကြပါတယ်။ DSA ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုတည်းမှာတင် MLM စနစ်ကို အသုံးပြုနေတဲ့ လုပ်ငန်းပေါင်း (၁၀၀၀)ကျော်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
MLM စနစ်ရဲ့ မူလဇစ်မြစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ အခုချိန်ထိ အငြင်းပွားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် MLM ပုံစံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့ (၁၉၂၀–၁၉၃၀)ခုနှစ်တွေလောက်ကတည်းက ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ MLM စနစ်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမှာဆိုရင် ဖြန့်ဖြူးရေးကိုယ်စားလှယ်၊ စီးပွားဖက်၊ အလွတ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်၊ အလွတ်တန်းကိုယ်စားလှယ် စသဖြင့် အမျိုးမျိုးခေါ်ဆိုကြတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ကုမ္ပဏီရဲ့ ထုတ်ကုန် ဒါမှမဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုကို ဖြန့်ဖြူးပိုင်ခွင့်ရရှိပါတယ်။ ဒီအတွက်ကိုလည်း သူတို့မှာ လစာတော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို အဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ ထုတ်ကုန် ဒါမှမဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုကို ကုမ္ပဏီကနေ လက်ကားဈေးနဲ့ ၀ယ်ယူနိုင်ပြီး သုံးစွဲသူထံကို လက်လီရောင်းချနိုင်ခဲ့ရင် လက်ငင်းအမြတ်အပြင် အဆင့်လိုက် အကျိုးခံစားခွင့် အစီအစဉ်အရ သူတို့ကိုယ်တိုင်ရောင်းအားနဲ့ သူတို့ဖိတ်ခေါ်ပေးထားတဲ့ Downline အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ရောင်းအား ပမာဏပေါ်မှာမူတည်ပြီး ကုမ္ပဏီကပေးတဲ့ ကော်မရှင်ကိုပါ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ ကုမ္ပဏီက ပစ္စည်းတွေကို အမြဲတစေ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်တဲ့ သုံးစွဲသူကွန်ယက်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် နောက်ထပ်အဖွဲ့ဝင်သစ်တွေကို ဖိတ်ခေါ်စည်းရုံးခြင်းတို့နဲ့ Downline အဖွဲ့အစည်းကို တိုးချဲ့ရပါတယ်။
MLM စနစ်က တကယ်ဝင်ငွေအမြောက်အမြားပေးနိုင်လား ?
ကမ္ဘာမှာ လူသိများထင်ရှားတဲ့ MLM လုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ ၀င်ငွေပမာဏနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးမှာ ဖော်ပြထားတာတွေကို လေ့လာကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
– အစိုးရစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရ ဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Amway ကုမ္ပဏီရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲက (၁၀)ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ထွန်းပြီး (၁၀)ယောက်မှာ (၁)ယောက်လောက်ကပဲ ထုတ်ကုန်ကို ရောင်းချနိုင်တယ်လို့ TIMES သတင်းစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
– Newsweek သတင်းစာစောင်ကလည်း Mona Vie ကုမ္ပဏီရဲ့ (၂၀၀၇)ခုနှစ် ၀င်ငွေကြေညာချက်အရ အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ (၁)ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပဲ အဆင့်မှီ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး (၁၀)ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကသာ တစ်ပတ်ကို ဒေါ်လာ(၁၀၀)နဲ့အထက် ၀င်ငွေရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
– အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ MLM လုပ်ငန်းတွေက အဖွဲ့ဝင် (၉၀)ရာခိုင်နှုန်းရဲ့ တစ်နှစ်အတွင်းပျမ်းမျှဝင်ငွေဟာ ဒေါ်လာ(၅၀၀၀)ထက်မပိုတဲ့အတွက် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘ၀ကို တည်ဆောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
– အငြိမ်းစား စီးပွားရေးပါမောက္ခတစ်ဦးဖြစ်ပြီး Multi-level marketing အကြောင်းကို နှစ်ပေါင်း (၄၀)လောက် လေ့လာသုတေသနပြုခဲ့သူ Roland Whitsell ကလည်း MLM အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ လူရှာဖို့ ၀န်ပိနေတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီလုပ်ငန်းတွေရဲ့ မူလထုတ်ကုန်က အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပြီး လူတွေရဲ့ တလွဲမျှော်လင့်ချက်ကို စွမ်းအားပြည့်ဝတဲ့ စိတ်ဓာတ်လှုံ့ဆော်ရေးအင်အားအဖြစ် အသုံးပြုနေတာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
တရားဝင်မှု ရှိမရှိ ?
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ပြည်နယ်(၅၀)မှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ MLM စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို affiliate marketing ဒါမှမဟုတ် Home-based business franchising ဆိုပြီး ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲပြါတယ်။ Pyramid Schemes တွေကလည်း သူတို့ကို သူတို့ တရားဝင် MLM စီးပွားရေးပုံစံဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ MLM လုပ်ငန်းတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း တရားဝင်ဖြစ်သည့်တိုင်အောင် Pyramid ပုံစံဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။
အမေရိကန်ဗဟိုကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်ကတော့ ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချတာထက် အဖွဲ့ဝင်စည်းရုံးနိုင်မှုအပေါ်ကို ကော်မရှင်ပေးတဲ့ MLM ပုံစံတွေကို ရှောင်ဖို့ သတိပေးထားပါတယ်။ ဒီလိုပုံစံတွေက တကယ့်ကို တရားမ၀င် Pyramid Schemes တွေ ဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ Pyramid Schemes တွေက အန္တရာယ်များပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အဖွဲ့ဝင်စည်းရုံးနိုင်မှုအပေါ်မှာ ကော်မရှင်ပေးတာကြောင့် အဖွဲ့ဝင်သစ်တွေ မစည်းရုံးနိုင်တော့တဲ့အခါမှာ အစီအစဉ်တစ်ခုလုံး ပြိုလဲသွားတတ်ပြီး လူအများစုက လက်လွတ်ခွက်ချွတ်နဲ့ ကျန်ခဲ့တတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် MLM လုပ်ငန်းတိုင်းက တရားဝင်မဟုတ်သလို တော်တော်များများက Pyramid Schemes တွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပဲ ကုန်ပစ္စည်းကို သုံးစွဲလိုသူကို ရောင်းချနိုင်တဲ့ ရောင်းအားပေါ်မှာထက် အဖွဲ့ဝင်ရှာဖွေနိုင်မှုနဲ့ အဖွဲ့ဝင်သစ်တွေကို ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချနိုင်မှုပေါ်မှာ အကျိုးခံစားခွင့် ကော်မရှင်ပေးတဲ့ MLM ကုမ္ပဏီတွေကို ရှောင်ကြဖို့ USFTC က သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
MLM လုပ်ငန်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အများစုကို ပေးထားတဲ့ကတိတွေ တည်အောင် ဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်တဲ့အတွက်လည်း ဝေဖန်ပြစ်တင်ခံနေရပါတယ်။ သေချာလေ့လာကြည့်မယ့်ဆိုရင် သူတို့လုပ်ငန်းတွေမှာ ရရှိတဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ ငွေကြေးပြည့်စုံမှုက အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလောက်တောင် မသေချာပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ အဖွဲ့ဝင်သစ်တွေ အမြဲတမ်းလိုအပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ MLM စနစ်မှာ ပါဝင်သူတွေကို အဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်သစ်တွေ ရှာဖွေစည်းရုံးဖို့ တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့် MLM လုပ်ငန်းအများစုကလည်း Pyramid Schemes ပုံစံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ Multi-level Marketing ကုမ္ပဏီအများစုဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ တရားဝင်လက်ခံထားတဲ့ pyramid scheme ပုံစံတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ ရပ်တည်နေကြပါတယ်။
တကယ်တမ်းတော့ စီးပွားရေးဝေဖန်ရေးဆရာ Robert L.FitzPatrick ရဲ့စကားအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင် Multi-level Marketing (MLM) လုပ်ငန်းတွေဟာ လေထဲမှာ လွင့်မျောနေတဲ့ ဆပ်ပြာပူဖောင်းတွေနဲ့ တူပြီး နောက်ဆုံးမှာ ပေါက်ကွဲ ပျောက်ကွယ်သွားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုနှဈပိုငျးအတှငျး မွနျမာနိုငျငံမှာ ထူးထူးခွားခွား အရောငျးပုံစံနဲ့ အကြိုးခံစားခှငျ့ရှိတဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှေ အတျောမြားမြားစိမျ့ဝငျပြံ့နှံလာခဲ့ပါတယျ။ အရငျကတညျးကလညျး အလားတူပုံစံနဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှေ ရှိခဲ့ပမေယျ့ အခုလောကျအထိ အရအေတှကျမမြားခဲ့သလို လူသိလညျးနညျးခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုအခါမှာတော့ အမှတျတံဆိပျနာမညျအမြိုးမြိုးနဲ့ လုပျငနျးတှေ မြားစှာပျေါထှကျလာပွီး နညျးမြိုးစုံ၊ စနဈမြိုးစုံနဲ့ ဆှဲဆောငျနကွေပါတယျ။ ဒီလို စီးပှားရေးလုပျငနျးတှကေတော့ Multi-level Marketing (MLM) စနဈနဲ့ ရောငျးဝယျဖွနျ့ဖွူးနတေဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှပေဲဖွဈပါတယျ။
Multi-level Marketing (MLM) ဆိုတာကတော့ အရောငျးသမားတှအေနနေဲ့ သူတို့ရောငျးနိုငျတဲ့ ရောငျးအားပျေါမှာသာမက ဖိတျချေါစညျးရုံးပေးနိုငျတဲ့ အခွားအရောငျးသမားတှရေဲ့ ရောငျးအားအတှကျကိုပါ အကြိုးခံစားခှငျ့ပေးထားတဲ့ Marketing Strategy တဈခုပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီလို အရောငျးသမားတှကေ ဖိတျချေါစညျးရုံးပေးထားပွီး အဖှဲ့ဝငျဖွဈလာတဲ့ အရောငျးသမားတှကေို Downline (တခြို့တှကေတော့ ဒီလိုချေါတာကို လကျခံတတျကွပါဘူး) လို့ ချေါဆိုကွပွီး အဆငျ့လိုကျအဆငျ့လိုကျ အကြိုးခံစားခှငျ့တှေ ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျပါတယျ။ MLM လုပျငနျးတှကေို Pyramid Selling, Network marketing နဲ့ referral marketing လို့လညျး ချေါဆိုကွပါတယျ။
ပွောရမယျဆိုရငျ MLM ဆိုတာ ၀ယျသူထံ တိုကျရိုကျရောငျးခတြဲ့ စနဈတဈမြိုးပဲဖွဈပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့တော့ ကုနျပစ်စညျးတှကေို တိုကျရိုကျရောငျးခတြယျဆိုရာမှာ အရောငျးသမားတှဟော ခငျမငျရငျးနှီးမှုကွောငျ့ပဲဖွဈဖွဈ၊ နှုတျပွောစကားနဲ့ ကွျောငွာရောငျးခတြာပဲဖွဈဖွဈနဲ့ သုံးစှဲသူတှကေို ရောငျးခတြာဖွဈပါတယျ။ MLM စနဈမှာတော့ အရောငျးသမားတှဟော ကုမ်ပဏီရဲ့ထုတျကုနျတှကေို ရောငျးခရြုံသာမက သုံးစှဲသူတှကေို ဖွနျ့ဖွူးရေး အရောငျးကိုယျစားလှယျတှအေဖွဈနဲ့ ပါဝငျဖို့အထိ ဖိတျချေါစညျးရုံးကွပါတယျ။
MLM ပုံစံနဲ့ အကြိုးခံစားခှငျ့ပေးတဲ့ ကုမ်ပဏီတှမှော ဝဖေနျမှုတှေ၊ တရားစှဲဆိုခံရမှုတှေ မကွာခဏကွုံတှရေ့လေ့ ရှိပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့တော့ Pyramid Schemes နဲ့ အသှငျတူနတော၊ ကုနျပစ်စညျးစြေးနှုနျးကွီးမွငျ့တာ၊ ကနဦး ရငျးနှီးထညျ့ဝငျငှမြေားတာ၊ ကုနျပစ်စညျးရောငျးခဖြို့ထကျ အဖှဲ့ဝငျသဈစညျးရုံးရေးကို ပိုပွီးအားပေးလှုံ့ဆျောတာ၊ အဖှဲ့ဝငျတှအေနနေဲ့ ကုနျပစ်စညျးတှကေို မလိုအပျပဲ ၀ယျယူနရေတာ၊ ပုဂ်ဂိုဟျရေးခငျမငျမှုတှကေို ကုနျပစ်စညျးရောငျးခဖြို့၊ အဖှဲ့ဝငျအဖွဈဆှဲဆောငျဖို့ ပဈမှတျထားခိုငျးတာ၊ ရှုပျထှေးပွီး နားလညျရခကျတဲ့ အကြိုးခံစားခှငျ့ပုံစံသတျမှတျထားတာတှကွေောငျ့ ဝဖေနျပွဈတငျခံနကွေရတာဖွဈပါတယျ။
ပွငျသဈနိုငျငံသား စာရေးဆရာနဲ့ စြေးကှကျပညာရှငျ Dominique Xardel ကတော့ Network marketing နဲ့ Multi-level Marketing တို့ဟာ အနကျတူသံကှဲဝေါဟာရတှသော ဖွဈပွီး တိုကျရိုကျအရောငျးစနဈပုံစံကှဲတှေ ဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ Xardel ရဲ့အဆိုအရ Direct Selling (တိုကျရိုကျအရောငျးစနဈ)နဲ့ Network marketing (ကှနျယကျစြေးကှကျ)စနဈဆိုတာတှကေ ဖွနျ့ဖွူးရေးစနဈကို ဆိုလိုပွီး Multi-level Marketing ဆိုတာကတော့ အကြိုးခံစားခှငျ့အစီအစဉျကို ဖျောညှနျးတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ Multi-level marketing ကို ရညျညှနျးဖျောပွတဲ့ အခွားအချေါအဝျေါတှကေတော့ Word-of-mouth marketing, interactive distribution နဲ့ relationship marketing စတာတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး အချေါအဝျေါတှေ အမြိုးမြိုးကို အသုံးပွုတာက Multi-level Marketing စနဈကို တရားမဝငျ ငှကွေေးကလိနျကမြှု (Ponzi schemes), ဆငျ့ပှားစာ (Chain letters) စတဲ့ သုံးစှဲသူတှဆေီကို လိမျလညျနတေဲ့ စနဈပုံစံတှနေဲ့ ကှဲပွားဖို့ ဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
Multi-level Marketing လုပျငနျးတှကေို ထောကျခံအားပေးနတေဲ့ အဖှဲ့အစညျးတဈခုဖွဈတဲ့ Direct Selling Association(DSA) ကတော့ (၁၉၉၀)ခုနှဈမှာ အဖှဲ့ဝငျကုမ်ပဏီတှရေဲ့(၂၅)ရာခိုငျနှုနျးလောကျသာ MLM စနဈကို အသုံးပွုခဲ့ပျွီါ (၁၉၉၉)ခုနှဈမှာ (၇၇.၃)ရာခိုငျနှုနျးအထိ မွငျ့တကျလာတယျလို့ ထုတျပွနျကွညောခဲ့ပါတယျ။ (၂၀၀၉)ခုနှဈမှာ DSA အဖှဲ့ဝငျကုမ်ပဏီတှရေဲ့ (၉၄.၂)ရာခိုငျနှုနျးက MLM စနဈကို သုံးနပွေီဖွဈပွီး ရောငျးခသြူ (၉၉.၆)ရာခိုငျနှုနျးနဲ့ ရောငျးအား (၉၇.၁)ရာခိုငျနှုနျးအထိ ရှိခဲ့တယျလို့လညျး ကွညောခဲ့ပါတယျ။ Avon, Electorlux, Tupperware နဲ့ Kirby တို့လို ကုမ်ပဏီတှကေ ယခငျ Single level Marketing ပုံစံနဲ့ ထုတျကုနျတှကေို ရောငျးခရြာကနေ MLM ပုံစံအကြိုးခံစားခှငျ့စနဈကို သုံးလာကွပါတယျ။ DSA ရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြအရ အမရေိကနျပွညျထောငျစုတဈခုတညျးမှာတငျ MLM စနဈကို အသုံးပွုနတေဲ့ လုပျငနျးပေါငျး (၁၀၀၀)ကြျောရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
MLM စနဈရဲ့ မူလဇဈမွဈနဲ့ ပတျသကျလို့ကတော့ အခုခြိနျထိ အငွငျးပှားနရေဆဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ MLM ပုံစံ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှကေတော့ (၁၉၂၀-၁၉၃၀)ခုနှဈတှလေောကျကတညျးက ရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ MLM စနဈရဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံမှာဆိုရငျ ဖွနျ့ဖွူးရေးကိုယျစားလှယျ၊ စီးပှားဖကျ၊ အလှတျတနျးစီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျ၊ အလှတျတနျးကိုယျစားလှယျ စသဖွငျ့ အမြိုးမြိုးချေါဆိုကွတဲ့ အဖှဲ့ဝငျတှဟော ကုမ်ပဏီရဲ့ ထုတျကုနျ ဒါမှမဟုတျ ၀နျဆောငျမှုကို ဖွနျ့ဖွူးပိုငျခှငျ့ရရှိပါတယျ။ ဒီအတှကျကိုလညျး သူတို့မှာ လစာတော့ရမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒီလို အဖှဲ့ဝငျကိုယျစားလှယျတှအေနနေဲ့ ထုတျကုနျ ဒါမှမဟုတျ ၀နျဆောငျမှုကို ကုမ်ပဏီကနေ လကျကားစြေးနဲ့ ၀ယျယူနိုငျပွီး သုံးစှဲသူထံကို လကျလီရောငျးခနြိုငျခဲ့ရငျ လကျငငျးအမွတျအပွငျ အဆငျ့လိုကျ အကြိုးခံစားခှငျ့ အစီအစဉျအရ သူတို့ကိုယျတိုငျရောငျးအားနဲ့ သူတို့ဖိတျချေါပေးထားတဲ့ Downline အဖှဲ့အစညျးရဲ့ ရောငျးအား ပမာဏပျေါမှာမူတညျပွီး ကုမ်ပဏီကပေးတဲ့ ကျောမရှငျကိုပါ ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီအတှကျ အဖှဲ့ဝငျတှအေနနေဲ့ ကုမ်ပဏီက ပစ်စညျးတှကေို အမွဲတစေ တိုကျရိုကျဝယျယူသုံးစှဲနိုငျတဲ့ သုံးစှဲသူကှနျယကျတဈခုကို တညျဆောကျခွငျး ဒါမှမဟုတျ နောကျထပျအဖှဲ့ဝငျသဈတှကေို ဖိတျချေါစညျးရုံးခွငျးတို့နဲ့ Downline အဖှဲ့အစညျးကို တိုးခြဲ့ရပါတယျ။
MLM စနဈက တကယျဝငျငှအေမွောကျအမွားပေးနိုငျလား ?
ကမ်ဘာမှာ လူသိမြားထငျရှားတဲ့ MLM လုပျငနျးကွီးတှရေဲ့ ၀ငျငှပေမာဏနဲ့ ပတျသကျပွီး ရငျးမွဈအမြိုးမြိုးမှာ ဖျောပွထားတာတှကေို လလေ့ာကွညျ့ရငျ သိနိုငျပါတယျ။
– အစိုးရစုံစမျးစဈဆေးမှုတှအေရ ဗွိတိနျနိုငျငံအခွစေိုကျ Amway ကုမ်ပဏီရဲ့ ကိုယျစားလှယျတှထေဲက (၁၀)ရာခိုငျနှုနျးလောကျပဲ အရောငျးအဝယျဖွဈထှနျးပွီး (၁၀)ယောကျမှာ (၁)ယောကျလောကျကပဲ ထုတျကုနျကို ရောငျးခနြိုငျတယျလို့ TIMES သတငျးစာမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
– Newsweek သတငျးစာစောငျကလညျး Mona Vie ကုမ်ပဏီရဲ့ (၂၀၀၇)ခုနှဈ ၀ငျငှကွေညောခကျြအရ အဖှဲ့ဝငျတှရေဲ့ (၁)ရာခိုငျနှုနျးလောကျကပဲ အဆငျ့မှီ အကြိုးခံစားခှငျ့ရရှိခဲ့ပွီး (၁၀)ရာခိုငျနှုနျးလောကျကသာ တဈပတျကို ဒျေါလာ(၁၀၀)နဲ့အထကျ ၀ငျငှရေရှိခဲ့တဲ့အကွောငျး ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
– အမရေိကနျပွညျထောငျစုမှာ MLM လုပျငနျးတှကေ အဖှဲ့ဝငျ (၉၀)ရာခိုငျနှုနျးရဲ့ တဈနှဈအတှငျးပမျြးမြှဝငျငှဟော ဒျေါလာ(၅၀၀၀)ထကျမပိုတဲ့အတှကျ ဘယျလိုနညျးနဲ့မှ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ဘဝကို တညျဆောကျနိုငျမှာ မဟုတျဘူးလို့လညျး ဖျောပွခဲ့ကွပါတယျ။
– အငွိမျးစား စီးပှားရေးပါမောက်ခတဈဦးဖွဈပွီး Multi-level marketing အကွောငျးကို နှဈပေါငျး (၄၀)လောကျ လလေ့ာသုတသေနပွုခဲ့သူ Roland Whitsell ကလညျး MLM အဖှဲ့ဝငျတှအေနနေဲ့ လူရှာဖို့ ၀နျပိနတေတျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဒီလုပျငနျးတှရေဲ့ မူလထုတျကုနျက အခှငျ့အလမျးဖွဈပွီး လူတှရေဲ့ တလှဲမြှျောလငျ့ခကျြကို စှမျးအားပွညျ့ဝတဲ့ စိတျဓာတျလှုံ့ဆျောရေးအငျအားအဖွဈ အသုံးပွုနတော ဖွဈတယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။
တရားဝငျမှု ရှိမရှိ ?
အမရေိကနျပွညျထောငျစုက ပွညျနယျ(၅၀)မှာ လုပျကိုငျနတေဲ့ MLM စီးပှားရေးလုပျငနျးတှကေို affiliate marketing ဒါမှမဟုတျ Home-based business franchising ဆိုပွီး ချေါဝျေါသုံးစှဲပွါတယျ။ Pyramid Schemes တှကေလညျး သူတို့ကို သူတို့ တရားဝငျ MLM စီးပှားရေးပုံစံဖွဈဖို့ ကွိုးစားနကွေပါတယျ။ MLM လုပျငနျးတှကေိုယျတိုငျကလညျး တရားဝငျဖွဈသညျ့တိုငျအောငျ Pyramid ပုံစံဖွဈနတေတျကွပါတယျ။
အမရေိကနျဗဟိုကုနျသှယျရေးကျောမရှငျကတော့ ကုနျပစ်စညျးရောငျးခတြာထကျ အဖှဲ့ဝငျစညျးရုံးနိုငျမှုအပျေါကို ကျောမရှငျပေးတဲ့ MLM ပုံစံတှကေို ရှောငျဖို့ သတိပေးထားပါတယျ။ ဒီလိုပုံစံတှကေ တကယျ့ကို တရားမဝငျ Pyramid Schemes တှေ ဖွဈတာကွောငျ့ပါ။ Pyramid Schemes တှကေ အန်တရာယျမြားပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ အဖှဲ့ဝငျစညျးရုံးနိုငျမှုအပျေါမှာ ကျောမရှငျပေးတာကွောငျ့ အဖှဲ့ဝငျသဈတှေ မစညျးရုံးနိုငျတော့တဲ့အခါမှာ အစီအစဉျတဈခုလုံး ပွိုလဲသှားတတျပွီး လူအမြားစုက လကျလှတျခှကျခြှတျနဲ့ ကနျြခဲ့တတျတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ MLM လုပျငနျးတိုငျးက တရားဝငျမဟုတျသလို တျောတျောမြားမြားက Pyramid Schemes တှေ ဖွဈနတေတျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အဖှဲ့ဝငျမဟုတျပဲ ကုနျပစ်စညျးကို သုံးစှဲလိုသူကို ရောငျးခနြိုငျတဲ့ ရောငျးအားပျေါမှာထကျ အဖှဲ့ဝငျရှာဖှနေိုငျမှုနဲ့ အဖှဲ့ဝငျသဈတှကေို ကုနျပစ်စညျးရောငျးခနြိုငျမှုပျေါမှာ အကြိုးခံစားခှငျ့ ကျောမရှငျပေးတဲ့ MLM ကုမ်ပဏီတှကေို ရှောငျကွဖို့ USFTC က သတိပေးခကျြထုတျပွနျထားပါတယျ။
MLM လုပျငနျးတှဟော သူတို့ရဲ့အဖှဲ့ဝငျအမြားစုကို ပေးထားတဲ့ကတိတှေ တညျအောငျ ဖွညျ့ဆညျးမပေးနိုငျတဲ့အတှကျလညျး ဝဖေနျပွဈတငျခံနရေပါတယျ။ သခြောလလေ့ာကွညျ့မယျ့ဆိုရငျ သူတို့လုပျငနျးတှမှော ရရှိတဲ့ အောငျမွငျမှုနဲ့ ငှကွေေးပွညျ့စုံမှုက အခွားစီးပှားရေးလုပျငနျးတှလေောကျတောငျ မသခြောပါဘူး။ နောကျတဈခကျြကတော့ အဖှဲ့ဝငျသဈတှေ အမွဲတမျးလိုအပျနတောပဲဖွဈပါတယျ။ MLM စနဈမှာ ပါဝငျသူတှကေို အဖှဲ့ဝငျကိုယျစားလှယျသဈတှေ ရှာဖှစေညျးရုံးဖို့ တိုကျတှနျးလှုံ့ဆျောမှုတှကွေောငျ့ MLM လုပျငနျးအမြားစုကလညျး Pyramid Schemes ပုံစံဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ Multi-level Marketing ကုမ်ပဏီအမြားစုဟာ အမရေိကနျပွညျထောငျစုမှာ တရားဝငျလကျခံထားတဲ့ pyramid scheme ပုံစံတဈခုအဖွဈနဲ့ ရပျတညျနကွေပါတယျ။
တကယျတမျးတော့ စီးပှားရေးဝဖေနျရေးဆရာ Robert L.FitzPatrick ရဲ့စကားအတိုငျးပွောမယျဆိုရငျ Multi-level Marketing (MLM) လုပျငနျးတှဟော လထေဲမှာ လှငျ့မြောနတေဲ့ ဆပျပွာပူဖောငျးတှနေဲ့ တူပွီး နောကျဆုံးမှာ ပေါကျကှဲ ပြောကျကှယျသှားကွမှာ ဖွဈပါတယျ။
Previous: ပျော်ရွှင်ကြည်နူးသည့် ဆက်ဆံရေးဖြစ်ဖို့ အမူအကျင့် (၁၀)ခု
Next: ၂၁ ရာစု မှာ အမှန် အကန်အောင်မြင်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲမှ အချို့